8 Iskuulada Dumarka ee ugu Wanaagsan ee Dunida | AASraw
/blog/Mukhaadaradda Mukhaadaradda Jinsiga/8 Iskuulada Dumarka ee ugu Wanaagsan ee Dunida Dunida
Posted on 08 / 29 / 2018 by Dr. Patrick Young ku qoray Mukhaadaradda Mukhaadaradda Jinsiga. Waxay leedahay 59 Comments.
Dhibaatada libido, labadaba dumarka iyo ragga labadaba, waa dhibaato caadi ah, badanaa waa daal, walaac, da 'ama si caadi ah. Si aad u kiciso rabitaan, waxaa jira daroogo jinsi ah oo loo isticmaalo in lagu xoojiyo tan.
1998, Maamulka Cuntada iyo Maandooriyeyaasha ee Maraykanka iyo Yurub (FDA iyo EFSA) ayaa ansixiyay ED si loogu daaweeyo suuqa Viagra (), taas oo sababtay dareen caalami ah. Natiijooyinka bukaan-socodka ee sildenafil citrate 171599-83-0 ayaa lagu daabacay joornaalka caafimaadka ee ugu sarreeya ee New England Journal of Medicine.
Qeybta daroogada jinsiga
Kuwaas oo loo isticmaalo Male
Tadalafil (171596-29-5), waxaa loo isticmaalaa daaweynta cillad aan caadi ahayn. Tadalafil waa daroogo xaddidaya nooca fosfodiesterase ee nooca 5 (PDE-5) oo mas'uul ka ah niyadjabinta nitric oxide vasodilator, oo hadda lagu iibiyo kiniin sida magaca ganacsiga Cialis. Waxaa sidoo kale dhowaan loo ansixiyey daaweynta sambabada sanbabada ee sanbabada, waxaana loo isticmaalay xaalado kale. Kiniinada Cialis, 5mg, 10mg iyo 20mg ee qiyaasta, ayaa ah midabka huruudka ah ee la daboolay filim iyo qaab badi. Qiyaasta la ansixiyey ee loogu talagalay hypertension sambab waa 20 mg waxaana lagu iibiyaa astaanta adcirca.
Daraasad cilmiyadeed ayaa muujisay in tadalafil ay kor u qaadi karto saameynta antihypertensive ee daawooyinka nitrate. Tani waxaa la aaminsan yahay inay tahay natiijada isku-dar ah Nitrate iyo Tadalafil oo ku yaal waddada nitric oxide / cGMP. Sidaa daraadeed, bukaannada qaadashada nooc kasta oo Nitrate ah ayaa laga mamnuucay inay qaataan alaabtan.
Sildenafil citrate 171599-83-0 waa daawo loo isticmaalo daweynta xinjirta erectile iyo hypertension pulmonary arthritis (PPH). Sildenafil waxay xakameyn kartaa waxqabadka PDE5 ee aadanaha. PDE5 ayaa si weyn ugu sharaxan lafa-qabashada guska oo ku yaraanta unugyada iyo xubnaha kale. Ka dib marka la qaato sildenafil, murqaha vasomotorum cavomosum wuxuu ka roonaadaa tallaalka daroogada, socodka dhiigga ayaa kordhay, jidhka maskaxda ayaa la isku dhejiyaa, guska ayaa la dhisaa, taas oo keenta saameyn daweyn ah oo ku dhaca faleebada qaloocda.
Bukaanka qaba foosha xun ee qalitaanka galmada ayaa leh celcelis ahaan muddada falcelinta daqiiqada 27 ka dib markii maamulka afka (xogta bukaan-socodka loo qaybiyo inta u dhexeysa daqiiqadaha 12 iyo 70).
Vardenafil 224785-91-5 waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo xummad aan qalafsanayn. Daawadani waa nooca 5 fosfodiesterase (PDE5) inhibitor ah. Dawada afka ee daawadani waxay si wax ku ool ah u wanaajin kartaa tayada iyo muddada koritaanka iyo hagaajinta heerka guusha ee ragga bukaanka qaba xanuunka erectile. Bilaabidda iyo dayactirida qalabka faleebo ayaa la xiriirta nasinta unugyada murqaha ah ee maskaxda.
Marka lagu daro in loo isticmaalo in lagu daaweeyo cillad aan fiicnayn, vardenafil waxay kaloo ka hortagi kartaa dheecaan goor hore ah.
Avanafil 330784-47-9 waa daroogo dhakhtar qoraya oo ka socda kooxda PDE-5 ee loo isticmaalo daaweynta xanuunka qalitaanka. Vardenafil waxaa lagu xaqiijiyay in uu yahay jiil cusub oo fosfodiesterase 5 (PDE5) inhibitor, iyo vardenafil hydrochloride waa mid aad u awood badan, aad u xiisa badan, oo si fiican u dulqaatay. Hawlgalku wuxuu keenay fursado cusub oo loogu talagalay daaweynta cillad aan caadi ahayn (ED).
Mudo intee le'eg ayay qaadanaysaa Cialis 20mg inay shaqeyso?
Dhibaatooyinka ka yimaada PDE-5 waxay u baahan yihiin arooska galmada. Iyadoo ku xiran wax-qabadka shakhsi ahaaneed iyo dulqaadashada, qiyaasta ayaa la kordhin karaa ugu badnaan XMUMX mg ama la yareeyo mg-mg 200. Marka la barbardhigo kuwa kale ee PDE-50, doorashooyin sare oo avanafil ah oo loogu talagalay fosfodiesterase-5 (PDE-5) ayaa la muujiyay, taas oo keeneysa dulqaadasho wanaagsan.
Zydena (Udenafil 268203-93-6) waxaa laga sameeyey Koonfurta Kuuriya (by Dong-A Pharm), oo lagu bilaabay 2005. Udenafil waa PDE-5 inhibitor ah. Zydena waxaa loo tixgeliyaa daroogo amaan ah oo ku saabsan cillad aan caadi ahayn oo aan laheyn waxyeelo halis ah sida aragti cilladaysan, wax saameyn ah oo lama filaan ah ayaa la helay ilaa hadda. Laakiin taasi waa waqti gaaban oo suuqa caalamiga ah, ma jirto baadhitaano badan. 30 daqiiqado ayaa lagama maarmaan u ah daaweynta si ay wax uga qabato. Cuncunka, foomka qiyaasta daawooyinka, ka hortagga, qaabka ficilku waa siman yahay Viagra.
Flibanserin 147359-76-0 waa daawo asal ahaan loo soo saaro daaweynta niyadjabka, laakiin waxaa lagu arkay in aysan aheyn mid waxtar u leh aaggaas, waxaana hadda loo soo celiyay daaweynta qaloocsanaan la'aanta galmada (HSDD) ee haweenka - si kastaba ha ahaatee, waxtarka lama xaqiijin halkan in ay keentay muran badan oo ku saabsan mowduuca flibanserin (Addyi) iyo saameynta la sheeganayo.
aasaas. jimicsiga tijaabooyinka caafimaadka ee la sameeyey, waxaa la xaqiijiyey in walaxda ay hagaajinayso 0.5 iyo 1 tirada khibradaha galmada ee guulaysata mudo hal bil ah, marka la barbardhigo ciribtirka, wax-qabad aan fiicnayn oo xisaabeed. Haweenka ka qaybgalay daraasadda waxay ku bilaabeen celcelis ahaan inta u dhaxaysa 2 iyo 3 khibradeeda jimicsiga bil kasta.
Flibanserin HCL Mechanism of action, waxay u dhaqmaan on waddooyinka neurotransmitter, labadaba iyo excitatory both. Iyadoo loo marayo tallaabo dilaacin ah 5-HT 1A reseptors serotonin, waa qaab la mid ah daawooyinka antidepressant kala duwan iyo ficil fara-xajin ah ee 5-HT 2A reseptors.
Waqtiga Dib u Dhigashada:
Dapoxetine HCL 119356-77-3 waa daroogo loo isticmaalo daaweynta ejaculation premix. Waa xakabaynta serotonin ee xakameynaya muddada gaaban iyo ficilka. Iyada oo ku saleysan xaalada hore ee daraasadda, saddex-ilaa afar-laab oo la kordhiyo xilliga qallafsan ee qulqul-darrada ah ayaa laga fili karaa. Intaa waxaa dheer, dapoxetine waxay hagaajin kartaa qanacsanaanta galmada iyo xakameynta la xiriirta haweenka shahwada, iyo yareynta dhibaatooyinka iyo dhibaatooyinka dadka dhexdooda.
Dyclonin HCL 536-43-6 waa daawada suuxinta oo loo isticmaalo suuxdin ee xuubabka xajiinta ka hor baaritaannada caafimaadka iyo hababka. Waxa kale oo laga helaa lozenges iyo buufin meelaha cunaha iyo dhuunta. Dyclonin ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu xakameeyo gawaarida gaga.
Waxyaabahani waxay xannibi karaan isdhexgalka dareemayaasha ama dareemayaasha kala duwan, waxay xakameynayaan dareenka taabashada iyo xanuunka, waxayna qabaan waxyeellada xanuunka, antipruritic iyo bactericidal ee maqaarka.
Badeecadani waa nooc ketone ah oo nooca suuxinta ah. Waxay leedahay bilaa dhakhso ah waxayna socotaa waqti dheer. Waxay leedahay waxyeellada antipruritic, xanuunka iyo bactericidal ee maqaarka.
Gabagabo iyo talo bixin
Sababaha loo qaato daroogada galmada
Daroogada galmada waxay kaa caawin kartaa xalinta dhibaatooyinka qaarkood. Si kastaba ha noqotee, haddii ka dib qaadashada kiciyaha mudo ah, dhibaatadaada wali lama xallin, ha ka waaban inaad la tashato xirfadle (jimicsi ama dhakhtarka) si uu u muujiyo dhibaatadaada. Dambe wuxuu ku siin doonaa talo iyo xalal loola dagaallamo. Waa kuwan yoolalka faahfaahsan ee kala duwan ee daroogada galmada.
-Kulalkaaga si aad u heshid raaxo inta lagu jiro galmadaaga
Halkani waa ujeedada ugu muhiimsan ee daroogada galmada: in dadka laga caawiyo inay ku raaxaystaan ​​inta ay galmoodaan xaaskooda. Tani waa arrin muhiim ah in la tixgeliyo qiyaasta lagu tilmaamay sanduuqa wax soo saarka, laakiin haddii aad ixtiraamto, libido-gaaga ayaa kaliya lagu xoojin karaa oo rabitaanka warbixintaada kaliya ayaa la heli karaa.
-In la dagaalamo xannibaadyada iyo la dagaallama dhibaatooyinka dhirta
Haddii aad la kulantid dhibaatada kacsiga, daroogada galmada waxay kaa caawin kartaa inaad la dagaalanto. Marka lagu daro inaad ka hor tagto cudurkaan, waxaad sidoo kale ka heli doontaa galmo jilicsan oo aad ku qanci kartid xaaskaaga iyada oon ka baqin "burbur" muddada ficilka; dareemid niyadjab iyo dareen ceeb leh waqti go'an.
Dumarku ma aha kuwo xakameynaya xayiraad. Mar labaad, si loola dagaallamo dhibaatadan, qaadashada daroogada galmada waxay noqon kartaa mid xiiso leh. Dumarkaan ugu dambeeya, xannibaadyadaadu way baabi'i doonaan, waxaadna dareemi doontaa in ka badan markaad fuliso.
-In la wanaajiyo galmadaada iyo cilaaqaadyadaada
Ma rabtaa in aad leedahay galmo adag? Ma ku riyootaa inaad hesho raaxaysi inta lagu jiro ficiladaada? Daroogada galmada waxay kaa caawin kartaa dib u soo-celinta dareenkaaga! Waxyaabahaan waxaa qaadi kara ragga iyo sidoo kale dumarka raba in ay ku noolaadaan jinsi aad u xoogan oo doonaya in xiriirkooda ay dhacaan xaaladaha ugu fiican.
Sidaa daraadeed qaadashada daroogada jinsiga ayaa noqon doonta caawinaad weyn oo aad u mahadsantahay isaga, xidhiidhadaada cilaaqaadku waxay noqon doontaa mid ka fiican sidii hore!
Inta lagu jiro nolosha, waxaa jiri kara waqtiyo marka nin ama naagtu aanay rabin inay galmo la galaan lamaanahooda. Dhibaatadani waa mid maskaxiyan ah waxayna sababi kartaa arrimo kala duwan: daal, dhibaatooyinka shakhsiyeed, culeyska ... Waxay kuwaasi keeni karaan libido libido iyo raaxo.
Si dib loo soo celiyo labadan dareen, qaadashada daroogada galmada waxay noqon kartaa mid firfircoon. Xaqiiqdii, waxay kaa caawin kartaa inaad xoojiso libidoaga oo aad dib u hesho rabitaanka galmada qaarkood!
Iyo haddii aad rabto qaar ka mid ah talooyin si aad u dheeraato raaxada, halkan waa maqaal wax ku ool ah!
Waa maxay daawada galmada ugu fiican ee ragga?
Waqtigaan, waxaa jira kiciyado badan oo jinsi ah oo ragga ah ee suuqa. Doorashada iyo iibsashada ugu wanaagsani way adkaan kartaa, mana aha wax aan caadi ahayn in la helo luminta marka la eego doorashooyinkan kala duwan. Inta kale ee maqaalkani, waxaan ku siinayaa daawooyin galmo oo dhowr ah oo kaa caawin kara hagaajinta libido si hubaal ah!
Laakiin ka hor intaanad helin, ogow in waxa ugu horreeya ee la sameeyo ay tahay inaad la hadasho dhakhtarkaaga. Xirfadlahani wuxuu kuu sheegi doonaa haddii qaadashada kiciyaha uu lagama maarmaan yahay iyo haddii ay ku habboon tahay xaaladdaada guud ee caafimaadka. Si kastaba ha ahaatee, inta badan kaneecada wax soo saarka sida Viagra ama Vialis waxaa kaliya oo lagu siin karaa warqad dhakhtar oo sidaas awgeed waa lagama maarmaan inaad la tashato dhakhtarkaaga haddii aad rabto inaad hesho.
Sidoo kale, badeecadaha kala duwan ee lagu soo bandhigay hoosta ma aha afafodigaacs. Halkaan uma joogaan si aad u kordhisid libido, laakiin waxaa loola jeedaa inaad kordhiso socodka dhiiggaaga si toos ah guskaaga si aad u hesho oo aad uhesho koritaanka saxda ah muddada galmadaaga.
Kiciyeyaashani waxay kaa caawin doonaan inaad samayso dhisme ku qanco, laakiin adigoon hawo lahayn. Si ay u dhacdo, kicinta galmada waa in la dhejiyaa.
5 jecel yahay
Sida PDE5 inhibitor, waxay gacan ka geysaneysaa kor u qaadista wareegga dhiigga, wadnaha oo si deg deg ah u socda ayaa muujinaya saameynta daawada
Maqaalka intiisa kale, ayaa wadaagi doona faahfaahinta isticmaalka daroogada kasta. waxaa ka mid ah isdhexgalka daroogada tadalafil, isdhexgalka daroogada ee flibanserin ... iwm.
Maqaalka intiisa kale, wuxuu wadaagi doonaa macluumaad faahfaahin dheeraad ah ee daawooyinka galmada. Ku dar qiyaasta, saameynaha, isticmaalka ... iwm.
Daawooyinka kale ee la wadaago galmada, waxay heli doonaan macluumaad dheeraad ah. Ma aha oo kaliya waxyeelada daawada ee tadalafil ama saamaynta ay leedahay Flibanserin, iyo macluumaadka qiyaasta ... iwm.
Taas macnaheedu ma aha in Viagra ee qaabka budada ah, walaxda firfircoon ee Viagra waa sildenafil citrate
Sheekooyinka Cheska09 / 25 / 2018 at 9: 24 am
Waxaan weydiiyey ninkayga haddii aan isku dayi karno daroogadaas jinsiga mar uun. Hal dhibic, waxaan dareemay in ay jireen runtii farqi ahaan waxqabadkeena mudadaas oo aan isticmaalnay. Waxaa laga yaabaa in Placebo, ama dhab ahaantii saameyn ku yeelato. Laakiin wali, ma aha qayb ka mid ah hawlgalada galmada ee maalinlaha ah. Marka aan rabno wax ka duwan.
Shakhsi ahaan, weli ma aan isku dayin daroogada galmada, laakiin waxaan maqaalkan u hayaa ujeedooyin mustaqbalka ah. Haddii ay ku abuuri karto waayo-aragnimo galmo ka weyn, markaa ma arko wax sabab ah oo aanan u isticmaalin. Hase ahaatee, waxaan u maleynayaa in daroogooyinkaas loo isticmaali karo si dhexdhexaad ah si aanay u helin ku-tiirsanaan.
Daawooyinka galmada ma ammaan yihiin? Waxaan rajeynayaa inaysan keeni karin ku-tiirsanaan. Dhammaanba, si aad ula tasho dhakhtar xirfadle ah ayaa ah kan ugu muhiimsan.
Waxaa wanaagsan in daawooyinkan loo helo ragga iyo dumarka. Waxay u egyihiin sida dheeraadka ah ee caafimaad ee ay dhakhaatiirtu u qori karaan oo ay u heli karaan.
Waa daaweyn noocaas ah si ay dadku u helaan nolol caafimaad qaba. Waa wax weyn natiijooyinka oo dhan iyo taxaddarrada ayaa ku qoran.
Dapoxetine ayaa kaa caawin doonta yareynta xiriirka dadka dhexdiisa ah ee dadka ay dhici karto in ay sidaas sameeyaan waxa ay noqon doontaa mid caqli gal ah in la isku dayo in lammaane ahaan u yeesho dhibaatooyin jinsi halis ah oo noocaan ah.
Maandooriyaha jinsiga weyn sida sidaan u shaqeyn kari waayo, waa in ay ahaato dadaal ay adeegsadeen oo ay si cad u qeexeen in ay u baahan tahay kicinta user.
sheyga09 / 23 / 2018 at 12: 32 am
Waan ogahay in kuwani yihiin budada daroogada wanaagsan ee isticmaalka isticmaalka galmada, laakiin sidoo kale way fiicnaan lahayd inaad u sheegto akhristayaasha qaar waxyeelo soo wajahda walwalka sidoo kale si taxadar leh.
Dhibaatooyin badan oo guur ah ayaa ka yimaada ragga uurka leh iyo shahwada dhicis ah. Waxaa wanaagsan in aan leenahay mukhaadaraad kor u kaca oo sidan oo kale ah si aan u xalino dhibaatadan.
Sidaa ayaad u sheegeysaa in daroogada sii kordheysa ee daroogada, viagra, ay hadda ku jirto qaab budo ah? Joy! Hadda waxaad ka heli kartaa viagra shaahaaga. Laakiin, qabashada waa, ma hagaajin doonto waxqabadkaaga, kaliya baska ayaa kaa joojiya inaad tagto hahahahaha jilicsan.
Sexy Mack09 / 22 / 2018 at 9: 19 pm
Tani ma runbaa? Sidaa daraadeed tani waxay i heli doontaa wareegga 15 ee galmada? Taasi waa habdhaqan galmo oo badani u baahan tahay in lagu daro daroogooyinka
Ma hubo sababta aan halkan u joogo, laakiin waxaan hubaa wax ka ogo dhibaatooyinka qalafsan. Waxaan ula jeedaa ka dib markii aan guursanayey sanado badan ninkeygu wuxuu hadda qaataa siyaado si uu kor ugu qaado darawalkiisa. Haddii tani ay wali tahay maalmo jir ah oo uu jeclaan lahaa laakiin hadda wuu ku qaboojiyay.
Victor09 / 22 / 2018 at 8: 32 pm
Anigu ma ahan mid u furan daawooyinka galmada ugu yaraan marka ay timaado dawooyinka. Waxyaabaha dabiiciga ah sida ginseng waxay ku sameeyaan khiyaamada !!! Habka kaliya ee aan u isticmaali karo waa marka aan weynaado. Haa xaqiiqdii waxaan ka fikirayaa tan.
Saamaynta PDE5 ee Tadalafil iyo waayo-aragnimada farxadda leh ee haweenka viagra Flibanserin labadaba waa ku filan labada jinsi labadaba si ay u raadsadaan kaalmo dheeraad ah. Waxaan hubaa in ay jiri doonaan qaybo badan oo daneynaya mid kasta oo ka mid ah daawooyinka ku qoran US iyo dibadda.
Natiijooyinka iyo daraasaadka kiliinikada ayaa aad ugu rajo weyn. Nolol caafimaad qaba oo caafimaad leh ayaa muhiim u ah dad badan waxaana ku faraxsanahay daawooyinkan si wanaagsan ayaa loo helaa.
Waxaa muhiim ah in aad haysatid qaar ka mid ah macluumaadka ku saabsan waxa aad heleyso ka hor intaadan ku boodin jeexinta ama qolka musqusha leh bac ah oo ka buuxa wax. Si aan kuugu caawinno, waxaanu ku dhex mari jirnay baaritaanada daroogada daroogada, oo lagu daba galo daraasaddaha xadidan, oo la tashaday dad badan - laga bilaabo naas-nuujinta maskaxda, oo ka soo jeeda dhakhaatiirta iyo dhakhaatiirta cilmi-nafsiga-sidaanu u wada dhicin dhammaan xogta ku jirta halkaas oo ku saabsan khatarta sare ee daroogooyinka.
Daawooyinka galmada qaarkood waxay kuu furi karaan si ay u dhamaystiraan ecstasy, halka kuwo kale ay yihiin kuwo dhameystiraya dileyaasha. Waxaad magaca u dirtaa daroogada, qofna wuxuu leeyahay waxay jecelyihiin galmo.
nolli ahaan09 / 22 / 2018 at 5: 45 am
Waxaa wanaagsan in daawada sii kordheysa ee galmada labadaba lab ama dheddigba ay tahay labadaba.
Tani waxay hubin doontaa caawimaadda dib u soo kabashada xidhiidhada ay tahay in ay noqdeen gabar sababtoo ah dhibaatooyinka galmada. jacaylka waa in ay ka dhigaan tan tan dib u soo kabashada.
Si aad ugu tiirsanaato daroogada galmada waxay cadeyn kartaa in ay tahay dhimasho. Waxay ka dhigi kartaa mid kalsooni ku filan waxqabad galmo.
Waxaa xiiso leh in daawooyinkani ay kor u qaadaan waxqabadka galmada iyo raaxada. Thanks for sharing.
Natiijooyinka xiisaha leh. Waxaan jeclaan lahaa in haddii ay jiraan saameyno ka yimaada qaadashada Tadalafil ama Flibanserin ka badan inta lagu qorey. Thanks for sharing!
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan helno maqaalkani, waxaan waydiin doonaa ninkeyga inaan akhriyo tan. Qof kastaa wuxuu u baahan yahay jinsi, uma baahna inuu dareemo inuu ka xishoonayo arrintan. Waad ku mahadsantahay inaad wadaagto macluumaadka ku saabsan budada daroogada jinsiga ee maqaalkani, waa mid aad u faa'iido leh!
Aniga iyo lammaanahaygu waxay raadinayaan siyaabo lagu dhigi karo nolosheena jinsiga oo aad u xiiso badan. Daroogooyinkaasi waxay u egyihiin sida ay u qalmaan inay isku dayaan. Mahadsanid!
Hadda waxaan ogahay daroogooyinka ay isticmaalaan si kor loogu qaado waxqabadka galmada inta lagu jiro waqtiyada xasaasiga ah! Thanks, jacaylkaaga maqaarka.
Marnaba wax dhibaato ah kuma qabin xaaskeyga oo aan ka aheyn waxoogaa wakhti go'an. Waxaan u maleynayaa inaan ubaahan karo dheellitooyinkan PDE5 dhowr sanadood inkastoo haha.
Waxaan kugula talin doonaa Udenafil maaddaama ay tahay sida viagra in dadka loo isticmaalo .Qodobka wanaagsan ee ku saabsan midkan ayaa ah saamaynta kooban.
Raaxo inta lagu jiro jinsiga aad ayey muhiim ugu tahay lamaanayaasha waxayna sameyn karaan ama dib u dhigi karaan noloshooda galmada. Waxaan rajeynayaa kuwa aan haysan raaxada inay u isticmaali karaan daawooyinkan wanaagooda.
Waxaan jecelahay meesha aad ku tilmaantay in haddii dhibaatada galmada aan lagu xallin daroogadaas galmada, markaa waa in dhakhtarku la tashado. Waxaan u maleynayaa inay noqon doonto waxa ugu fiican ee lagu sameeyo xaaladdan.
Nunu09 / 20 / 2018 at 11: 27 pm
Nolosha galmada ee lamaanuhu waxay u egtahay wicitaan nool oo xiriir kasta ah sida waa in la sii wanaajiyo waqti ka waqti. Waxaa wanaagsan in la isticmaalo mid ka mid ah kor u qaadayaasha kuwaas oo wanaagsan ee xiriirka.
Maalmahan daawooyinkan jinsiga ah waxaa sida dhabta ah loo isticmaalaa dhallinyaro caafimaad leh oo dhibaato leh. Si kastaba ha ahaatee, waxay u suurtageliyeen dadka waayeelka ah iyo ED in ay dib u helaan nolol qiimo leh noloshooda.
Kabtan U09 / 20 / 2018 at 10: 44 pm
Waxaa laga yaabaa in hadda ay tahay waqtigii ay ka wada hadli lahaayeen waxyaabahan soo socda ee ah furfurnaanta, galmada, jimicsiga. Taas macneheedu waa jinsigu waa mid muhiim u ah sidii ay noqon laheyd dhibaato. Iyada oo taas la sheegay, waxaan ku faraxsanahay in maqaalkani uu jiro. Ugu yaraan dadka ayaa si tartiib ah u aqbalaya tan.
Machine09 / 20 / 2018 at 9: 46 pm
Xaggee bay ku jiraan qiyaasta xitaa? Miyaan macquul ahayn? Xaggee bay ku jiraan qaybaha iyo walxaha? Waxaan u jeedaa wax aad kaadinayso, Ogaanshaha waxa ku dhaca xisaabinta.
Waxay u egtahay sida daroogada si fiican loo tijaabiyay loona hubiyo isticmaalka galmada. Waxaan jeclaan lahaa in lagu daro daroogooyinka ama waxyaabaha dheeraadka ah ee aan la qaadan marka loo isticmaalayo Tadalafil ama Flibanserin. Thanks for sharing.
Horray for libido sare! Dyclonin iyo flibanserin ayaa u eg sida maaddooyinka awoodda leh ee loogu talagalay waxqabadka jinsiga. Thanks for sharing.
Aqoontu waa awood, waxkasta oo ay qaadan karto. Ugu yaraan waa in aan ubaahanahay nooc kasta oo kicin ah si aan u galo khibradda galmada aad ugu raaxaysato, hadda waan garanayaa waxa la qaadanayo.
Tani waa qodobka ugu xiisaha badan ee akhriya .... Waxaan mar horey isku dayey inaan isticmaalo tan - kaliya oo ka mid ah xiisaha. Oo si daacad ah, anigu runtii kuma riyaaqayo ... Waxaan dareemayaa in wadnahaygu si dhaqso badan u shaqeynayo oo aan dareemayo raaxo madaxayga.
Avanafil ayaa runtii iga caawisay. Waxaan ku dhawaaday niyadjab markii aan wax ka qabay dhibaatadeyda galmada, waxaana mahad naqay avanafil.
Waxaan isticmaalay sildenafil citrate markii aan dhibaato igu qabay. Wakhti yar ayay qaadatay, laakiin runtii way fiicnayd.
Saaxiibka Hiigsiga, qaybta ugu muhiimsan ee Viagra waa Sildenafil citrate, CAS 171599-83-0, waxaad ka heli kartaa faahfaahinta hoose ee tadalafil CAS 171596-29-5.
Waxaan hubaa ragga rahmaad la'aanta ah inaysan ku fikirin inay Vardenafil u tijaabiyaan sida daroogada oo si fudud u kordhi kara qalqal xumada qaloocsan iyo gacan ka geysashada tayada iyo mudada galmada.
Waxaan rajeynayaa in ragga qaba cillad aan caadi ahayn ay u helaan akhrinta Sildenafil citrate si ay u soo iibsadaan si ay uga caawiyaan dib ugu soo noqoshadooda. Waa arrin aad muhiim u ah nolosha galmada wanaagsan.
Ma aqaano sababta aan u akhriyo tan. haha. Laakiin macluumaad weyn oo ku saabsan arrintan. Kaliya iska hubi inaad waydiiso khabiir ka hor intaadan qaadin daawooyinka galmada.
Kurt09 / 19 / 2018 at 9: 14 pm
Waxaan talo kugula talinayaa dhakhtarkaaga marka hore ka hor intaanad qaadin mid ka mid ah daawooyinka galmada. Waxaan ula jeedaa inta badan waxaan aqriyaa kiisaska qof u dhinto sababtoo ah. Ku soo baxa bangiga macno ahaan.
Nasiib wanaag ma doonayo inaan qabto. HAA waxaan rajeynayaa marnaba. Si kastaba, waxaan la yaabay Viagra halkan.
Ilmaha09 / 19 / 2018 at 7: 05 pm
8 budada daroogada ee saameynta jinsiga, tani waxay siisaa hal dareen doorasho oo si adag u shaqeynaya doorashooyinka. Isku dayga dib u noqoshada cunsuriyada runtu waa mid aad u muhiim ah waliba budadaas ayaa si dhab ah u caawin doona.
qaado09 / 19 / 2018 at 6: 57 pm
Xaqiiqdii runtii waa mid kulul, lamaanayaashu waxay kufadhigaan boostadan si ay u kordhiyaan noloshooda jinsiga. Shakhsi ahaan waxay ubaahan yihiin macluumaadkan oo eega isticmaalka qof kasta oo u fiicnaanaya nidaamka. Macluumaadkani waa waqtigaa, wuxuu iibsan karaa ciyaalka oo aan la qorin.
Waan hubi doonaa in aan ku taliyo kuwan kuwa asxaabta ah ee jinsiga ah oo doonaya in ay kordhiyaan rabitaanka galmada! Thanks for sharing.
Kuwani waxay u egyihiin sida waxtarka leh ee waxtarka leh si loo kordhiyo noloshaada jinsigaaga, oo aad ogaatid waxa mukhadaraadka ay kuu qabanayaan. Thanks for sharing!
Waxaan u maleynayaa daawooyinka galmada sida sidani waxay sababi kartaa inay ku tiirsanaato, waxaanad naga dhigtaa kalsooni la'aan markaan isticmaalayno. Laakiin waxaa laga yaabaa in ay fiicnaan karto haddii aadan sidaan u isticmaalin, In yar ayaa ka badan.
Runtii ma hayo wax fikrad ah oo ku saabsan daroogada, daawooyinka kale ee jinsiga ah. Oo ay dhab ahaantii ka caawiyaan galmada?
Wow, ma aanan ogeyn in ay jiraan daawooyin jinsi kala duwan oo lab ah iyo ragga kale. Waa maxay wax xiiso leh!
Swiss09 / 19 / 2018 at 2: 35 am
Waxaan rajeynayaa kuwa runtii u baahan macluumaadkan si ay u akhriyaan maqaalkan.Ka u maleynayaa in kiciyaasha kiciyeyaashu ay noqon doonaan kuwo waxtarka leh maxaa yeelay waxay gacan ka geysan doontaa inay kobciso xiriirka wanaagsan ee labada lamaane.
Tani waa xaashi aad u qiimo leh. Dhibaatooyinka dhibaatadu waxay si dhab ah u jibiyeen qoysaska qaar oo kala duwan oo ay ku haboon tahay in qaar ka mid ah daawooyinka galmada ee wanaagsan sida sidan loo xalliyo oo loo qaato daaweyn. Awoodi in daroogooyinkan ay gacan ka geysan karaan kor u qaadista libido.
MAGL inhibitor iyo FAAH Inhibitor: JW-642 & OL-135 & PF-750 7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa 2018